လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာ (SEM): လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းမှုပုံစံများကို SEM နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ကျား၊ မလိင်ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ (2017) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On On Porn On
လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာ (SEM): လိင်နှင့်လိင်အရှေ့တိုင်းဆန် (2017) ရဲ့တစ်ဖက်မှာ SEM မှလိင်စိတ်နိုးထ၏ Comparing ပုံစံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျေနပ်မှု
comments: ဤလေ့လာမှု၌, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်း၏ 27 အမျိုးအစားများ (themes များ) နှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထအကြောင်းမေးခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်သုတေသီများသည်ဤ 27 အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားများသာသူတို့ကိုလူသိများသည်ရွေးကောက်ခဲ့သည်။ ဘယ်လိုစာရေးဆရာများဖြစ်သောအမျိုးအစားများဆုံးဖြတ်သည် "Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း" သော "ခေတ်ရေစီးကြောင်း" ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ထင်ရသောကျပန်းအမျိုးအစား (အောက်တွင်ပိုပြီး) ပေးထားနက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်နေဆဲခဲ့ကြသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောအမျိုးအစားများကိုနှစ်သက်သည်ဟုဆိုထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်မမေးမြန်းသော်လည်းလေ့လာမှုတွင်တွေ့ရှိချက်အရစာရေးသူများကိုအမျိုးအစားမတူညီသောညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများအဖြစ်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ -
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်များတွင်လျှို့ဝှက် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာ [porn] အုပ်စုများကြောင်းအကြံပြု, လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများယခင်ကယူဆထက်တိကျတဲ့လျော့နည်း fixation နှင့်အမျိုးအစားဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
အထူးသဖြင့် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM themes များမှလိင်စိတ်နိုးထ၏သိသိသာသာအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခံခဲ့ရသောလိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့ Non-လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများ, အဘို့, တွေ့ရှိချက်များကို Non-ဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင် SEM အားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများလြော့နညျး fixed ပိုစွယ်စုံဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြု, ယခင်ကယူဆထက်တိကျတဲ့နည်းအမျိုးအစား။ ဤသည်တစ်ဦးထက်ပို generalized SEM arousal ထောက်ခံပါတယ်နှင့် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကိုလည်းပိုပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်း ( "vanilla") themes များအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
လေ့လာမှုတွင်“ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမဟုတ်သောညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုသူများ” ဟုခေါ်သည့်“ ခေတ်ရေစီးကြောင်း” (Bukkake, Orgy, Fist-fucking) သို့မဟုတ်“ non-mainstream” ဟုခေါ်သည့်ညစ်ညမ်းမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုသည်။ Sadomasochism, စေး) ။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်တစ်မျိုးတည်းသောကပ်ကပ်ကိုစွဲမြဲစေသည်။ ("ပုံသေ" အရသာများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေအမြစ်မရှိသောပြောဆိုချက်ဥပမာတစ်ခုမှာ Ogas နှင့် Gaddam တို့၏ဝေဖန်ခံရသောစာအုပ်ဖြစ်သည် တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts.)
သို့သော်စာရေးသူ၏ဘက်လိုက်မှုသည်ဤတွေ့ရှိချက်ကိုသက်သေအဖြစ်သက်သေပြရန်တွန်းအားပေးနေသည် ဆန့်ကျင် အသစ်သောအမျိုးအစားများသို့မြင့်တက် porn အသုံးပြုသူများသည်။ ဒီကောက်နုတ်ချက်အတွက်စာရေးဆရာများမဟုတ်မမှန်တင်းမာမှုရှိခဲ့လျှင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သူကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကမရှိတော့ (အစဉ်အဆက်) ယခင်အမျိုးအစားများနှိုးဆွသောရှာတွေ့မယ်လို့အခိုင်အမာ (ဟမ်?):
SEM သုတေသနများ၏အခြေအနေတွင် non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အသုံးပြုသူအုပ်စုများအကြားလိင်စိတ်နိုးထပို generalized ပုံစံများတွေ့ရှိချက် (Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း) တဖြည်းဖြည်းပိုပြီး "အစွန်းရောက်" SEM ရဲ့ contents လိင်စိတ်နိုးထထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းယူဆသောတိုးတက်သော satiation အယူအဆကနေ diverging အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။32 Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အကြောင်းအရာလိင်စိတ်နိုးထလျှို့ဝှက် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများအတွက် (ပင်မ) လျော့နည်း "အစွန်းရောက်" SEM အကြောင်းအရာ arousal ဖယ်ထုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို, ဒီအယူအဆ corroborate မှမထင်ကြဘူး။
Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းအမျိုးအစား (ဆိုလိုသည်မှာအကြမ်းဖက်လိင်) ကနှိုးဆော်ခြင်းခံရသည်ဟုဟုဆိုကာနေသောစာရေးဆရာများဒါခေါ်ပင်မ porn (ဆိုလိုသည်မှာ Gangbang) ၏အမျိုးအစားအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံရနေတဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါသငျ့သညျ။ ဤသည်ကိုအခြားလေ့လာမှုများအားဖြင့်ဒဏ်ဍာရီများနှင့်မထောက်ပံ့သည်။ တကယ်တော့လေ့လာမှုသူတို့ (ထောက်ခံမှုအဖြစ်ကိုးကားဆင့်ခေါ်ချက် 32) အမှန်တကယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ့ရှိခဲ့သည် - ညစ်ညမ်းသောအပြာစာပေရုပ်ပုံများ (အသားအရောင်ခွဲခြားမှုသို့မဟုတ်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ) သို့ဆိုးရွားသွားသောပါဝင်သူများ၏ ၉၉.၅% သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ - deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား
ငါ, ဦးဆောင်ရေးသားသူ Gert Hald သည်ဆိုးရွားလှသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာနောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်သူသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်မှားယွင်းစွာတင်ပြ၏ဤအဆငျ့ဖွငျ့အံ့အားသင့်မဖြစ်သင့်မှန်း ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES) ။ ဒီမှာ PCES တစ်ဝေဖန်မှုကိုကြည့်ပါ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ self-ခံစားသက်ရောက်မှု (Hald & Malamuth 2008) ။
ယခုစာရေးသူ၏လိင်အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကို“ ခေတ်ရေစီးကြောင်း” သို့မဟုတ်“ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမဟုတ်သော” အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ကြပါစို့။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ“ ခေတ်ရေစီးကြောင်း” ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများကို“ ခေတ်မမီသော” ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်၊ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည်ဤစာရေးသူ၏တွေ့ရှိချက်များကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်မည်သည့် porn အမျိုးအစားသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်မည်သည့်ခေတ်မ ၀ င်သောအမျိုးအစားဖြစ်သနည်း။ Orgy နှင့် Bukkake သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်သော်လည်း“ latex” ကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းမဟုတ်သောရုပ်ပုံများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
"ကျွန်ခံ" Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်ခွဲခြားနေစဉ်ပုံ "Enemas" ခေတ်ရေစီးကြောင်းတံဆိပ်ကပ်ကြသနည်း ဘယ်လိုဒီနိုင်ပါတယ် Grey ကငါးဆယ် Shades ဇာတ်လမ်းများနှင့်သုံးအမြတ်အစွန်းမျက်နှာပြင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သန်း 125 ကျော်မိတ္တူ, ရောင်းချ? Enemas ငါးဆယ်အမျိုးအစားများ သငျသညျအနီးရှိရုပ်ရှင်ရုံကလုပ်မပေးနှင့်လိမ့်မည်ဖြစ်ကောင်းဘယ်တော့မှသိရသည်။
အဘယ်ကြောင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမဟုတ်သောအမျိုးအစား ၅ ခုနှင့်ပင်မအမျိုးအစား ၂၂ ခုရှိသနည်း။ ထို့အပြင် "Other" သည် bestial အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရခြင်းသို့မဟုတ်ကလေးညစ်ညမ်းခြင်းအပါအ ၀ င်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ခွေးရဲ့မနက်စာပါတကား
အဆီမိန်းကလေးငယ် ( "ကြီးမားသောလှပသောအမြိုးသမီးမြား [BBW]")
Gangbang (1 အမျိုးသမီးတစ်ဦး + ≥3ယောက်ျား)
ရင့်ကျက်သော (“ အမေ၊ အမေ၊ အမေကိုကျွန်မ fuck fuck ချင်ပါတယ် M MILF]”)
(enemas အပါအဝင်) ရွှေရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း
အကြမ်းဖက်လိင် (simulated မုဒိမ်းမှု, ကျူးကျော်များနှင့်အကျပ်ကိုင်)
UPDATE 2019သူသည်တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေအတွက်မဟာမိတ်များနီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားသူများဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသည့်အခါစာရေးသူအလက်ဇန်းဒါးŠtulhoferသည်သူ၏အစွန်းရောက်အစီအစဉ်-မောင်းနှင်ဘက်လိုက်မှုကိုအတည်ပြု YourBrainOnPorn.com။ Štulhoferနှင့် www.realyourbrainonporn.com မှာအခြားအလိုလားသူ porn "ကျွမ်းကျင်သူများက" အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်. Štulhofer တစ်ဦးကိုစေလွှတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်အက္ခရာခဲ့သည်။ ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များကို လိုက်. ခံရဖို့ဆက်လက်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ (2017) ။
Gert မာတင် Hald, Ph.D,Aleksandar Stulhofer, Ph.D, သူတို့ Lang, Ph.D
Non-ဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ (SEM) ၏အချို့သောအုပ်စုများမှလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသိပညာကွဲပြားခြားနားသော SEM အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဆွေမျိုးတိကျတဲ့အကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(ii) အကြား SEM-သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် Self-အကဲဖြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏အဆင့်ဆင့်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM ရဲ့ contents vs Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှလိင်စိတ်နိုးထ, ကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးခွဲခြားနိုင်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန် (ဈ) Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများနှင့် (iii) တရားဝင်မှုနှင့် non-အဓိကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ arousal စကေး (NPAS) ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့။
ခရိုအေးရှားအတွက် 2,035 ပုံမှန်အစည်းအဝေး SEM သုံးစွဲသူအွန်လိုင်း Cross-Section စစ်တမ်း။
ကွဲပြားခြားနားသော SEM themes များ 27 မှလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏ Self-အကဲဖြတ်။
Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM မှလိင်စိတ်နိုးထဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖွဲ့များကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများကိုပိုမို SEM အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် 27 SEM themes များအနှံ့လိင်စိတ်နိုးထမြင့်မားပျှမ်းမျှအဆင့်ဆင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်။ သာအနည်းငယ်ကွဲပြားမှု Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏ Self-အကဲဖြတ်တရားစီရင်ပိုင်အတွက်အုပ်စုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှုနှင့် NPAS ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအများဆုံးအသုံးပြုသူအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုလျှို့ဝှက် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများယခင်ကယူဆထက်တိကျတဲ့လျော့နည်း fixation နှင့်အမျိုးအစားဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အဲဒီအုပျစုမြားကိုပိုမိုခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အကြောင်းအရာလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအုပ်စုများထက်သူတို့ရဲ့ SEM-related လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများကိုပိုမိုစျကွောစီရငျမရှိကြပေ။ ထို့ပြင် non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏တိကျဖော်ထုတ်ခြင်းဟာ NPAS သုံးပြီးကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Hald GM, Stulhofer A, Lange T, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာ (SEM) - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းမှုပုံစံများကို SEM နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ လိင်နှင့်လိင်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ Sex Med 2017; X: XXX – XXX
လိင်ကအကဲဆတ်သောမီဒီယာ, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, လိင်စိတ်နိုးထ, self-အကဲဖြတ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ (SEM) မှလိင်စိတ်နိုးထစဉ်အလာ SEM အမျိုးမျိုးမှသင်တန်းသားများကိုဖော်ထုတ်နေဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့ပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေပေါ်ထွက်လာအဆိုပါကောက်ချက်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများယောက်ျားသည်ထက်အခြေအနေတွင်ပိုမိုထိခိုက်မခံနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်သရုပ်ဆောင်ဖို့လျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။1, 2,3မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသုတေသနပြုမှုအလွန်နည်းပါးသောလူများသည်ထိတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လူများသည် SEM ၏အကြောင်းအရာများ (ဥပမာ - ပါးစပ်၊ စအို၊ လူဆိုးဂိုဏ်းစသည်) နှင့်ပတ်သက်သောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။1, 4, 5, 6, 7
လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ, လိင်အကြမ်းဖက်သို့မဟုတ်အသက်မပြည့်သေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ပြစ်မှုထင်ရှားအထူးသသူတွေထဲမှာသည်ပြစ်မှုထင်ရှားရာဇဝတ်မှုများနှင့်အတူအရတော့ SEM ရဲ့ contents မှလိင်စိတ်နိုးထကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။8,9အဆိုပါ SEM အကြောင်းအရာပြစ်မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူအရတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခါဒီသုတေသနယေဘုယျအားဖြင့် (ဥပမာ, Non-ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသို့မဟုတ်ကျူးလွန်သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ပြစ်မှုထင်ရှားမဟုတ်) ထိန်းချုပ်မှုကြားတွင်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြား SEM မှလိင်စိတ်နိုးထ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်အကြံပြုထားသည်။9, 10, 11, 12
အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် SEM-related လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ, ပြစ်မှုထင်ရှားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများနှငျ့ပတျသကျသောသုတေသနဆန့်ကျင်သည် non-ဓာတ်ခွဲခန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှားပါးဖြစ်ကြသည်။6 ထို့ပြင် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း arousal အုပ်စုများ SEM ရဲ့ contents မှလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများအပေါ်အခြေခံပြီးဖော်ထုတ်စေခြင်းငှါရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးသုတေသန SEM အပေါ်စာပေကနေပျောက်နေသည်။6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 ထိုကဲ့သို့သောဖော်ထုတ်ခြင်းသည်အသုံး ၀ င်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်“ ပင်မမဟုတ်သည့်” SEM ကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်သို့မဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုခြင်းအလေ့အထများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, ထိုကဲ့သို့သောဖော်ထုတ်ခြင်းတိကျတဲ့ SEM contents တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏အမှန်တကယ်ပုံစံများတစ်ခုတည်းကိုသာအခြေခံသည်, တပ်မက်လိုချင်သော SEM contents တွေကို၏ရရှိမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။6,7Non-အဓိကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ arousal စကေး (NPAS) နဲ့အညီ, Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM (ဈ) sadomasochism, (ii) fetishism, (simulated အဓမ္မပြုကျင့်မှုအပါအဝင် (iii) အကြမ်းဖက်လိင်, ကျူးကျော်များ၏ SEM အမျိုးအစားမှလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများကိုရည်ညွှန်းသည် နှင့်အကျပ်ကိုင်), (ဃ) ကျွန်ခံခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုး () စည်းကမ်းအပါအဝင်နှင့် (v) ထူးထူးဆန်းဆန်းသို့မဟုတ်အစွန်းရောက် SEM6,7ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်ဖော်ထုတ်အဖြစ်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ 1st ရည်ရွယ်ချက်မှာ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများကွဲပြားခြားနားသော SEM ရဲ့ contents 27 မှ Self-အစီရင်ခံလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်အခြေခံပြီးကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
Little ကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏ Self-အကဲဖြတ်တရားစီရင်ပိုင်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM vs Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှလိင်စိတ်နိုးထသတင်းပို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စနစ်တကျကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ (ဥပမာ, တစ်ဦး paraphilia) နဲ့တဦးချင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနတိုးမြှင့်ကိုယ်ပိုင်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သားကောင်, အနုတ်လက္ခဏာတရားစီရင်ပိုင်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး၏အကဲဖြတ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။14, 15, 16, 17, 18 ထိုသို့သောအချက်များဆိုးရွားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အသုံးပြုသူများသည်အဖြစ် SEM လူနည်းစုအသုံးပြုသူအုပ်စုများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းတရားစီရင်ပိုင်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်။19, 20 ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ 2nd ရည်ရွယ်ချက်မှာ SEM-သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် Self-အကဲဖြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏ပုံစံများခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM vs Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှလိင်စိတ်နိုးထဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအုပ်စုများအတွက်နှိုင်းယှဉ်ပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
မကြာသေးမီက Hald နှင့်Štulhofer6,7အဆိုပါ NPAS တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ NPAS (အကိုလည်းတွေ့မြင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM-related ပုံစံများကိုတိုင်းတာတဲ့ 5-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည် အဓိကရလဒ်ဆောင်ရွက်ချက်များ) ။ သို့သျောလညျးကိုမှန်ကန်စွာ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM arousal အုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေပေမယ့်အဘို့ကိုခေါ်ထားပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်၎င်း၏အမှန်တကယ်နိုင်စွမ်း ဆက်စပ်. အတွက် NPAS ၏နောက်ထပ်အတည်ပြု။7 ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုတစ်ခု 3rd ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်စွာ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်မှန်းဖို့ NPAS များ၏စွမ်းရည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ဒီလေ့လာမှုကမကြာသေးမီက NPAS ဖွံ့ဖြိုးရန်အသုံးပြုခဲ့တူညီ Datasets ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။6,7အဆိုပါ 3rd လေ့လာမှုရည်ရွယ်ချက်မှကွန်နက်ရှင်ခုနှစ်, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါ NPAS များ၏ခိုင်ခံ့ပြီးတိကျစွာစမ်းသပ်ဖို့မူလအတိုင်းအတာတစ်ခုပြည်တွင်းရေး validation ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
ခရိုအေးရှားရှိ SEM အသုံးပြုမှု၊ လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးတို့ကိုအဓိကထားသည့်အွန်လိုင်းလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်စုဆောင်းထားသည့်ပိုကြီးသည့် Datasets မှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် SEM ကိုအသုံးမပြုနိုင်သူများသည်စီစဉ်ထားသည့်ဆန်းစစ်ခြင်းများနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်မှုရှိခြင်းကြောင့်ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း SEM ကိုအနည်းဆုံး“ အကြိမ်ကြိမ်” အသုံးပြုခဲ့သည့်အစီရင်ခံသူများသာဤလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အလေးသာမှုပိုမိုများပြားသည် (အလေးသာမှုအချိုး = ၀.၁၆၊ P SEM ကိုအသုံးပြုခဲသောသင်တန်းသားများကိုပိုင်ဆိုင်သည့် <.05) ။ SEM ကိုအသုံးပြုခဲသောနမူနာများနှင့်ကျန်ကျန်တဲ့နမူနာများအကြားသိသာထင်ရှားသောအသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။
ကွဲပြားခြားနားသော SEM အကြောင်းအရာမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများအပေါ်မျှပျောက်ဆုံးနေတန်ဖိုးများနှင့်အတူ 2,035 သင်တန်းသားများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်သူအများစုမှာ (၅၈.၂%၊ n = ၁,၁၈၅) အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများ၏အသက်များသည် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အထိ (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၃၀.၇၅၊ SD = ၉.၄၇) ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားအများစု (၅၇.၈%) သည်ကောလိပ် (သို့) တက္ကသိုလ်ပညာကိုရရှိကြသည်။ ၄၁.၀% တွင်အလယ်တန်းပညာရေးရှိသည်။ ပါဝင်သူများ၏ ၁၅.၇% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄ င်းတို့၏လစဉ်အိမ်ထောင်စု ၀ င်ငွေသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလေးပုံတစ်ပုံ (၂၇.၈%) သည်ပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုဝင်ငွေထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ နမူနာအများစုသည်ဆက်ဆံရေး (၄၇.၆%) သို့မဟုတ်လက်ထပ်ထားသူများ (၂၄.၀%) တွင်ရှိကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ၁ ပုံ ၁ ပုံ (၂၈.၄%) သည်တစ်ကိုယ်ရေအဖြစ်ရှိနေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ “ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ အသုဘများနှင့်မိသားစုအားလပ်ရက်များ” မှလွဲ၍ တက်ရောက်သူ (၄၅ ရာခိုင်နှုန်း) ၏အချိုးအစားသည်ဘာသာရေးအခမ်းအနားများကိုတစ်ခါမျှမတက်ရောက်ခဲ့ကြပါ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်10ပြီလ ၁၀ ရက်ကျော်ကောက်ယူခဲ့သောဤစစ်တမ်းကိုအွန်လိုင်းသုတေသနအတွက်သီးသန့်စီးပွားဖြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တင်ထားသောနဖူးစည်းစာတန်းများ၊ အဓိကသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် ၂ ခု၊ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များပါဝင်သည်။ ပါ ၀ င်သူများ၏ IP လိပ်စာများကိုအမည်ဝှက်ခြင်းသေချာစေရန်အမြဲတမ်းမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံအချက်အလက်များနှင့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်လိုအပ်သောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားပထမစစ်တမ်းမျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ မေးခွန်းလွှာမဖွင့်မီသင်တန်းသားများသည် ၄ ​​င်းတို့သည်အသက်အရွယ် (ဆိုလိုသည်မှာ years ၁၈ နှစ်) ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလူမှုဗေဒဌာန၊ လူ့ဘောင်နှင့်လူမှုသိပ္ပံဌာန၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤလေ့လာမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဆိုပါညွှန်ကိန်းများကိုတင်ပြအောက်တွင်။ စစ်တမ်းဖြည့်စွက်ရန်ပျမ်းမျှအချိန်ပဲ 22 မိနစ်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကို ၅ မှတ် Likert စကေး (၁ = သီးသန့်လိင်တူဆက်ဆံသူ ၅ မှသီးသန့်လိင်ကွဲ) ကို အသုံးပြု၍ စုံစမ်းခဲ့သည်။ Hald နှင့်Štulhoferနှင့်အညီ \_ t6 ပါဝင်သူများ၏တုံ့ပြန်မှုများကိုအောက်ပါအမျိုးအစားများသို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည် - ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်လုံလောက်သောစာရင်းအင်းစွမ်းအားကိုသေချာစေရန်0= သီးသန့်လိင်ကွဲလိင်ကွဲ (၅) နှင့် ၁ = လိင်ကွဲလိင်ကွဲ (၁-၄) ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏နယူးစကေး၏ 12-item ကိုဗားရှင်း21 ပြီးခဲ့သည့်6လအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ပေါင်းစပ်အတိုင်းအတာပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုညွှန်ပြပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်အတူ, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု (Cronbach α = 0.93) တွင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုပြသခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဆန်းစစ်ရန်အောက်ပါအချက်သုံးချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် -“ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကုသမှုသည်လုံးဝကျန်းမာသည်” နှင့်“ ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများကကျွန်ုပ်ကိုလူဆိုးဖြစ်စေသည်။ ” ၅ ချက်မှ Likert ကဲ့သို့သောစကေးကို အသုံးပြု၍ တုန့်ပြန်မှုများကို ၁ = ၁ မှကျွန်ုပ်နှင့်လုံး ၀ မသက်ဆိုင်ပါက ၅ အထိ = လုံးဝကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းနှစ်ခုသာအားနည်းစွာဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် (r = -2) ။
SEM အသုံးပြုမှုနှင့်သီးခြား SEM မာတိကာ
ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း SEM အသုံးပြုမှုအကြိမ်နှုန်းကို ၁ မှဘယ်တော့မှ ၈ = နေ့စဉ်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်နီးပါးအထိ ၈ မှတ်စကေးဖြင့်တိုင်းတာသည်။ အောက်ပါယေဘူယျမေးခွန်းကို အသုံးပြု၍ SEM ခေါင်းစဉ် ၂၇ ခုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့် ပါတ်သက်၍ ပါဝင်သူများအား“ အောက်ပါ SEM အမျိုးအစားတစ်ခုစီကိုသင်မည်မျှနှိုးဆွကြောင်းဖော်ပြပါ။ ” (ဇယား ၁) ။ ၅ မှတ် Likert-type စကေးကို အသုံးပြု၍ တုန့်ပြန်မှုများကိုပေးခဲ့သည် (၁ = လုံးဝမရ ၅ မှအလွန်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ) ။ ခေါင်းစဉ်များကို Hald အရရွေးချယ်ခဲ့သည်22 ကြီးမားသောစီးပွားဖြစ် SEM က်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်နှင့်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသော၏လူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်ပါစာရင်းများရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့် SEM အမျိုးအစားများဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။23, 24
ဇယား ၁ လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များအကျဉ်းချုပ်
Big ရင်သား 3
ကြီးမားသော penises 4
(ဆုံးမခွငျးအပါအဝငျ) ကျွန်ခံခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုး 7*
အဆီမိန်းကလေးငယ် ( "ကြီးမားသောလှပသောအမြိုးသမီးမြား [BBW]") 10
fuck ဆိုတဲ့လက်သီး 11
ဂန်ဘန် (အမျိုးသမီးတစ် ဦး + ယောက်ျား ၃ ဦး) 12
Orgy (အသေးစိတ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ) 16
Lolita (ဆယ်ကျော်သက်) 17
ရင့်ကျက်သော (“ အမေ၊ အမေ၊ အမေကိုကျွန်မ fuck fuck ချင်ပါတယ် M MILF]”) 18
(လိင်ကစားစရာအပါအဝင်) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ 19
အကြမ်းဖက်လိင် (simulated မုဒိမ်းမှု, ကျူးကျော်များနှင့်အကျပ်ကိုင်) 22*
Softcore (Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ) 23
(enemas အပါအဝင်) ရွှေရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း 24
(ရာဘာစေးအပါအဝင်) Fetish 26*
*ဒီအပြင်အဆင် Non-အဓိကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ arousal စကေးအရသိရသည် 'Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း "အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။6, 7
non-အဓိက SEM အကြောင်းအရာမှလိင်စိတ်နိုးထ
အဆိုပါ 5-item ကိုပေါင်းစပ်အတိုင်းအတာ (ကိုလညျးရှု Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အကြောင်းအရာလိင်စိတ်နိုးထတစ်ခုညွှန်ပြချက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် NPAS 6, 7) ။ အဆိုပါ NPAS ကွဲပြားခြားနားသော SEM themes များ 27 မှ Self-အစီရင်ခံလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်အခြေခံပြီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM-related ပုံစံများကိုတိုင်းတာရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ (ရာဘာစေးများအပါအဝင်) (ဈ) sadomasochism, (ii) fetishism, simulated အဓမ္မပြုကျင့်မှုအပါအဝင် (iii) အကြမ်းဖက်လိင် (ကျား, မများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကိုဖြတ်ပြီး, အငုပ်လျှိုးနေ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အချက်များ၏အပြင်းထန်ဆုံးညွှန်းကိန်းအောက်ပါ5Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM themes များပါဝင်သည် , ကျူးကျော်ခြင်း, အကျပ်ကိုင်), (ဃ) ကျွန်ခံခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုး () စည်းကမ်းအပါအဝင်နှင့် (v) ထူးထူးဆန်းဆန်းသို့မဟုတ်အစွန်းရောက် SEM ။6,7အခင်းအကျင်းတစ်ခုစီ၏သီးခြားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို NPAS မှမထောက်ပံ့ပါ။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ 5- အချက် Likert စကေး (5 = လုံးဝ 1 = အလွန်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ) ကိုအသုံးပြု။ themes များ5တစ်ခုချင်းစီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဘယ်လောက်နှိုးဆွဖော်ပြရန်ဟုမေးခဲ့သည်။
အဆိုပါခြုံငုံသရုပ်ခွဲနည်းဗျူဟာ5ခြေလှမ်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကွဲပြားခြားနားသော SEM themes များ 27 မှလိင်စိတ်နိုးထ၏အစီရင်ခံအဆင့်ဆင့်အပေါ်အခြေခံပြီးပြွတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသက်သက်သာ data တွေကိုမောင်းနှင်အုပ်စုဖြစ်သည်။ အတန်းများ၏အရေအတွက် Bayesian သတင်းအချက်အလက်စံနှုန်းကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမော်ဒယ် R ကို 5.0.1 အတွက် Mclust 3.1.2 တပ်ဆင်ခဲ့သည်။25, 26 SEM ဆောင်ပုဒ်တန်ဖိုးများယုတ်လိင်စိတ်နိုးထအသုံးပြုခြင်းသည် 10 အများဆုံးလိင်နှိုးဆွသောအကြောင်းအရာများနှင့် 10 အနည်းဆုံးနှိုးဆွသော themes များတစ်ဦးချင်းစီငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားများအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ Next ကိုကျနော်တို့ SEM themes များနှိုးဆွသောအနည်းဆုံးအများဆုံး arousal နှင့်5အဆိုပါ 10 တို့တွင် NPAS 10 Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း themes များ၏ဖြစ်ပျက်မှုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအတန်းအစားများအတွက်တစ်ဦးကတစ်ခုတည်း (Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း arousal) ရမှတ် 10 အများဆုံး arousal SEM themes များအကြား Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း themes များ၏နံပါတ်ကနေ themes များနှိုးဆွသောအဆိုပါ 10 အနည်းဆုံးတှငျတှေ့ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း themes များ၏နံပါတ်နုတ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးအား3တစ်ရမှတ်နှင့်အတူငုပ်လျှိုးအတန်း (Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုများအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်ဇယား ၁) နှင့်လူအပေါင်းတို့ကိုအခြားသူများခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုများအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။
ဇယား2ကျားမရေးရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအားဖြင့် stratified ဖော်ထုတ်ငုပ်လျှိုးနေအတန်းများအတွက် Non- ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM themes များ၏နံပါတ်*
လိင်ကွဲယောက်ျားများ (n = ၅၈၆)
လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသားများ (n = ၂၆၄)
လိင်ကွဲမိန်းမများ (n = ၇၂၂)
လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသမီးများ (n = ၄၆၃)
ခွဲခြားများအတွက် 10 အရေးအပါဆုံး themes များအကြား Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း themes များ၏ (က) နံပါတ်0052 1 12433010520
ခွဲခြားများအတွက် 10 အနည်းဆုံးအရေးကြီးသော themes များအကြား Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း themes များ၏ (ခ) အရေအတွက်51004100005140 1 4
စုစုပေါင်းရမှတ် (A + B) -5 -152 -302433-50-451 -4
G = အုပ်စု၊ SEM = လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာ။
*ခေတ်ရေစီးကြောင်းမဟုတ်သောလိင်မှုနှိုးဆွမှုပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအုပ်စုများ (ငုပ်လျှိုးနေသည့်အတန်းများ) ကို boldface အမျိုးအစားဖြင့်ဖော်ပြသည်။ စုစုပေါင်းရမှတ် (A + B) သည်အဓိကမဟုတ်သောအဓိကအကြောင်းအရာများ (စုစုပေါင်း = ၅)၊ ဇယား ၁) သည်အထူးသဖြင့်အုပ်စုတစ်စုများအတွက် 10 အနည်းဆုံးအရေးကြီးသော themes များအကြား Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း themes များ၏အရေအတွက်အားဖြင့်အရေအတွက်ကိုနုတ်သီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့များအတွက် 10 အရေးအပါဆုံး themes များအကြား။ ရှိသမျှသည်အခြားသောအတန်းအဖြစ်ကုသခဲ့ကြသော်လည်းကအနည်းဆုံး3တစ်ရမှတ်နှင့်အတူငုပ်လျှိုးအတန်း "Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အကြောင်းအရာအုပ်စုများမှလိင်စိတ်နိုးထ" အဖြစ်ခွဲခြားခံခဲ့ရသည် "ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အကြောင်းအရာအုပ်စုများမှလိင်စိတ်နိုးထ။ "
အဆိုပါရရှိသောငုပ်လျှိုးအတန်း Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့မဟုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတာနဲ့သူတို့ t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးယခင် 12 လအတွင်း SEM အသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းအဘို့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်ကို NPAS ရမှတ်များနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့စူးစမ်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအုပ်စုများ vs Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်အတူ ဆက်လက်. မျိုးစုံ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SEM အသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းများအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။ receiver-operating ဝိသေသလက္ခဏာများခါးဆစ်နောက်ထပ် NPAS ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်စွမ်းရည်များကိုတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လိင်စိတ်နိုးထအပေါ်ဟောပြောမှုတွေအလုပ်အားဖြင့်အကြောင်းကြား,1, 27 အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ခြင်းဖြင့် stratified ခဲ့ကြသည်။
ပထမလေ့လာမှုရည်မှန်းချက်အတွက်ငုပ်လျှိုးနေသောလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသင်တန်းသားများအနေဖြင့် SEM ခေါင်းစဉ် ၂၇ ခုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအားကွဲပြားသောလျှို့ဝှက်အတန်းများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည့်အတိုင်းအတာကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်ခုစီအတွက်ဆိုလိုသည် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ latent class) ကိုပုံတွင်ပြသည် ပုံ 1.
စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် 27 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ themes များအနှံ့လိင်စိတ်နိုးထ၏ပျမ်းမျှအဆင့်ဆင့်။ အတွက်ခွဲခြားအဖြစ်စက်ဝိုင်း, တြိဂံ, လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ကြယ်များ, အသီးသီးငုပ်လျှိုးအတန်း 1, 2,3နှင့်4ဖျောညှနျး ဇယား ၁။ အရေအတွက်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ themes များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များတွင်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ် ဇယား ၁။ တစ်ဦးချင်းစီအပြင်အဆင်အတွက်ရမှတ်0ကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်အလွှာကိုဖြတ်ပြီးဆိုလိုရှိသည်ဖို့ချိန်ညှိပြီ က y-ပုဆိန်ကွက်တို့တွင်အစကေးအတွက်ကွာခြား။ သီးသန့်လိင်ကွဲယောက်ျားအဘို့, non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့်ကိုယ်စားပြုထားသည်။ Non-သီးသန့်လိင်ကွဲယောက်ျားအဘို့, non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုသည်ကြယ်များကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ သီးသန့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီး, non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုများတြိဂံများနှင့်စက်ဝိုင်းများကကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ Non-သီးသန့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုသည်တြိဂံကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ အားလုံးအခြားအုပ်စုများခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာရဲ့ contents မှလိင်စိတ်နိုးထဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသင်တန်းသားများ၏ရေးစပ်နေကြသည်။
အဆိုပါ Bayesian သတင်းအချက်အလက်စံနှုန်း4ငုပ်လျှိုးအတန်းအားလုံး4အလွှာ (Non-လိင်ကွဲ vs ယောက်ျားနဲ့သီးသန့်လိင်ကွဲ vs အမျိုးသမီးတွေ) ကိုဖြတ်ပြီးအရှိဆုံးသင့်လျော်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ Next ကိုကျနော်တို့အများဆုံး arousal အဆိုပါ 10 ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နှင့် 10 အနည်းဆုံး (အဖွဲ့က SEM themes များနှိုးဆွသောအသီးအသီးအုပ်စုစုစုပေါင်း Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း arousal ရမှတ်တွက်ချက်ဇယား ၁).
အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်တင်ပြထားပါသည် ဇယား ၁။ အလွှာတစ်ခုစီတွင်လိင်ကွဲလိင်ကွဲအမျိုးသမီးများ မှလွဲ၍ အမျိုးသမီးများ မှလွဲ၍ သီးသန့်ခွဲခြားထားသည့်လူတန်းစား ၁ ခုသည် SEM ၏အဓိကမဟုတ်သောအကြောင်းအရာများအားနှိုးဆွမှုမြင့်မားစွာဖော်ပြသည်။ သီးသန့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများအတွက်၊ ထိုကဲ့သို့သောငုပ်လျှိုးနေသောလူတန်းစားအုပ်စု ၂ စုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဓိကမဟုတ်သောအုပ်စုသည်လိင်ကွဲမဟုတ်သူအမျိုးသားများအတွက်အလွန်သေးငယ်သည် (n = 1, 2%) ။ လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသမီးများအတွက်သင်တန်းသား ဦး ရေ၏ ၁ ပုံ ၁ ပုံကိုအဓိကမဟုတ်သောနိုးကြားမှုအုပ်စု (n = 25, 9.5%; n = 1, 127%, အသီးသီး) တွင်ခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းသည်လိင်ကွဲများထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျဆဲဖြစ်သည်။ အဓိကထက်ဝက်မဟုတ်သောနှိုးဆွအုပ်စု ၂ ခုအနက်မှတစ်ဝက်နီးပါးမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်သည် (n = 21.7, 129%) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရလိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအရ SEM ပါ ၀ င်မှု ၂၇ ခုအားလိင်နှင့်မဆိုင်သောလိင်မှုနှိုးဆွမှုကို အခြေခံ၍ non-main SEM သုံးစွဲသူအုပ်စုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကို (ယခင် 12 လအတွင်း SEM အသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းအတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်ဇယား ၁) ။ အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုသာလိင်ကွဲယောက်ျား (t များအတွက်သိသာထင်ရှားသောခဲ့ကြသည်584 = 2.07, P <.05, Cohen ကို = = 0.17) နှင့် Non-heterosexual မိန်းမများ (t461 = 3.01, P <.01, Cohen ကို 0.28 = 3) ။ နမူနာခွဲ (၄) ခုအနက် (၃) ခုတွင် SEM အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေသည်အဓိကမဟုတ်သော SEM အုပ်စုပါ ၀ င်သူများ၏အဓိက SEM အုပ်စုပါ ၀ င်သူများ (လိင်ကွဲယောက်ျား၊584 = -2.97, P <.001, Cohen ကို = = 0.031; လိင်ကွဲမိန်းမများ t631 = -7.17, P <.001, Cohen ကို = = 0.55; လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသမီးများ၊ t233 = -6.27, P <.0001, Cohen ကို 0.64. = XNUMX) ။
ဇယား 3D အသက်အရွယ်၊ SEM အသုံးပြုခြင်း၊ လိင်အကဲဖြတ်မှု၊ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု၊*
G1, 2,4(= = ၄၅၉)
G3 (n = ၁၂၇)
G1-3 (n = ၂၃၉)
G4 (n = ၁၂၇)
G3-4 (n = ၂၃၉)
G1-2 (n = ၂၃၉)
G1, 3,4(= = ၄၅၉)
G2 (n = ၁၂၇)
အသက်အရွယ် 36.32 (9.80) 34.32 (9.00) 2.07‡ (584) 33.14 (10.08) 35.40 (9.32) -1.08 (262) 28.18 (8.48) 27.85 (7.72) 0.55 (720) 27.62 (7.33) 25.36 (6.97) 3.01‡ (461)
အတိတ် 12 mo အတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency 6.14 (1.01) 6.43 (0.87) 2.97‡ (584) 6.44 (0.84) 6.64 (0.70) -1.15 (262) 4.79 (0.97) 5.39 (1.21) 7.17‡‖ (631) 5.25 (1.09) 5.95 (1.09) 6.27‡‖ (233)
အကြှနျုပျ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကျန်းမာဖြစ်ပါသည် 4.48 (0.76) 4.27 (0.91) 2.42‡ (177) 4.16 (0.85) 4.16 (0.62) .02 (261) 4.55 (0.70) 4.45 (0.86) 1.70 (636) 4.38 (0.79) 4.20 (0.96) 1.91 (197)
အကြှနျုပျ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ငါ့ကိုမကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးအောင် 1.38 (0.80) 1.63 (1.12) -2.40‡ (163) 1.55 (1.00) 2.08 (1.32) -1.96 (27) 1.36 (0.87) 1.45 (0.99) 1.27 (664) 1.45 (0.98) 1.40 (0.82) 0.52 (458)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု 46.81 (9.30) 45.60 (8.43) 1.25 (512) 45.89 (9.42) 44.27 (7.34) 0.78 (221) 48.05 (8.80) 47.38 (9.43) 0.95 (664) 45.77 (9.16) 46.22 (10.01) -0.43 (404)
*ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအုပ်စုများမဟုတ်သော်လည်း Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအုပ်စုများ (ငုပ်လျှိုးအတန်း), boldface အမျိုးအစားအတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။
‡P <.05; §P <.01; ‖P <.001
အဆိုပါ 2nd လေ့လာမှုရည်ရွယ်ချက်အဘို့, Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများထံမှသင်တန်းသားများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများထံမှသင်တန်းသားများကိုထက်အကဲဖြတ်သည့် 27 SEM themes များမှလိင်စိတ်နိုးထမြင့်မားပျှမ်းမျှအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးအမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံ 1 ခေတ်ရေစီးကြောင်း arousal အုပ်စုများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထခါးဆစ်၏အဆငျ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆိုပါ 27 SEM themes များအနှံ့တုံ့ပြန်မှု၏တူညီသောပုံစံနှင့်သာသနာကိုအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒီပုံစံအထူးသဖြင့်ယောက်ျားနှင့် Non-လိင်ကွဲအမျိုးသမီးအသံထွက်နှင့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးလျော့နည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံပေါ်ပါတယ်။
အတွက်တင်ပြအဖြစ် ဇယား ၁လိင်မှုကိစ္စနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အကဲဖြတ်မှုများသည်သာမန်လိင်ကွဲလိင်ခြားသူများတွင်သာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အဓိကမဟုတ်သောနိုးထနေသောအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ ပင်မခေတ်မှီ arousal အုပ်စုမှလိင်ကွဲယောက်ျားများသည်၎င်းတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများကိုသာမန်မဟုတ်သောအုပ်စုမှအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄ င်းတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများကိုသိသိသာသာ ပိုမို၍ ကျန်းမာရေးမကောင်းကြောင်း၊177 = 2.42, P <0.05, Cohen ကို = = 0.25; t163 = -2.40, P <.05, Cohen ကို = = 0.26, အသီးသီး) ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပင်မမဟုတ်သည့်နိုးကြားမှုအုပ်စုများအကြားလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုမှာကျား၊
တတိယလေ့လာမှုရည်ရွယ်ချက် (NPAS ၏အဓိကမဟုတ်သည့် SEM နှိုးဆွအုပ်စုတွင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကိုမှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်း) အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုကျား၊ SEM အသုံးပြုမှု၏သက်တမ်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်သောအမြင့်ဆုံး NPAS ရမှတ်များသည်အလွှာ ၄ ခုလုံးတွင်ပင်မမဟုတ်သည့် SEM အုပ်စုတွင်အဖွဲ့ဝင်များ၏အလေးသာမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည် (ချိန်ညှိထားသောအလေးသာမှုအချိုး = 3-4, P <.001) ။ NPAS ရမှတ်များသည်ပုံမှန်မဟုတ်သည့် SEM အုပ်စုတွင်အသင်း ၀ င်ခြင်းသည်မမျှော်လင့်ဘဲမျှော်မှန်းထားသည့်အရာထက်သိသိသာသာပိုကောင်းမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်းအတာ၏ထိရောက်မှုသည်လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများအတွက်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၆၈% နှင့် ၇၁% အသီးသီးသည်ပစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုများကိုမှန်ကန်စွာခွဲခြားထားသည်။ လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုသည် ၇၉% နှင့် ၉၆% အသီးသီးရှိသည်။
receiver-operating ဝိသေသလက္ခဏာများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ28 အဓိကမဟုတ်သော SEM အုပ်စုပါ ၀ င်သူများနှင့်အဓိက SEM အုပ်စုပါ ၀ င်သူများနှင့်ခွဲခြားရာတွင် NPAS ၏ထိရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများအရဒီတိုင်းတာချက်မှာလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအကြားမြင့်မားသောတိကျမှုရှိသည် (ကွေးကောက်နေသည့်areaရိယာ = 0.94, 95% CI = 0.91-0.97) နှင့်လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသားများ (AUC = 0.97, 95% CI = 0.95-0.99) နှင့် လိင်ကွဲမဟုတ်သောအမျိုးသမီးများ (AUC = 0.95, 95% CI = 0.93-0.97) အကြား။ လိင်ကွဲမိန်းမများအကြားတွင် NPAS ၏တိကျမှုသည်သာမန်ဖြစ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (AUC = 0.86, 95% CI = 0.83-0.89), ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီစားပွဲတင် 4).
ဇယား4NPAS ကိုအသုံးပြုပြီးအဓိကမဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်မီဒီယာအုပ်စုအားလိင်နှိုးဆွမှု၏အသင်းဝင်ကိုခန့်မှန်းခြင်း
NPAS ရမှတ်, AOR* (95% CI) 2.21 (1.91-2.56)‡‡ 2.39 (1.68-3.42)‡‡ 1.66 (1.53-1.79)‡‡ 3.22 (2.09-4.96)‡‡
စုစုပေါင်း% အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်မှန်း 93.7 95.1 78.5 96.1
ပစ်မှတ်အုပ်စုတစ်စု††ဟောကိန်းထုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်% 78.7 68.0 71.1 96.1
AOR = ချိန်ညှိအလေးသာမှုအချိုး; NPAS = Non- ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pornography Arousal စကေး။
*အတိတ် 12 လအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းများအတွက်ချိန်ညှိ။
ဒီလေ့လာမှုက Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM မှလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ SEM အသုံးပြုသူအုပ်စုများငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားလေ့လာဆန်းစစ် အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသော SEM ရဲ့ contents 27 ၎င်းတို့၏ Self-အစီရင်ခံလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်အခြေခံပြီးကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးဖော်ထုတ်နိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်အဆိုပါလေ့လာမှုသည်ဤအုပ်စုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏ Self-အကဲဖြတ်အကြားအလွန်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုလည်း Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် 27 SEM themes များအနှံ့လိင်စိတ်နိုးထမြင့်မားပျှမ်းမျှအဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တုန့်ပြန်၏ဤပုံစံအထူးသဖြင့်ယောက်ျားနှင့် Non-လိင်ကွဲအမျိုးသမီးအသံထွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုအတွင်းတရားဝင်မှုနှင့် NPAS ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှန်ကန်မှုကြောင့်သာမန်ခဲ့တော်မူသောအဘို့လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများ, မှလွဲ. အားလုံးအုပ်စုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
အထူးသဖြင့် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM themes များမှလိင်စိတ်နိုးထ၏သိသိသာသာအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခံခဲ့ရသောလိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့ Non-လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများ, အဘို့, တွေ့ရှိချက်များကို Non-ဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင် SEM အားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများလြော့နညျး fixed ပိုစွယ်စုံဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြု, ယခင်ကယူဆထက်တိကျတဲ့နည်းအမျိုးအစား။13, 14, 15, 16, 17 ဤသည်တစ်ဦးထက်ပို generalized SEM arousal ထောက်ခံပါတယ်နှင့် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကိုလည်းပိုပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်း ( "vanilla") themes များအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများကိုမကြာခဏပိုပြီး fixed နှင့်ကျဉ်းမြောင်းသတ်မှတ်ခံရဖို့သတင်းပို့ကြသည်ဘယ်သူကိုအတွက် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထပြဿနာများ (ဥပမာ paraphilias), နှင့်အတူတင်ပြလူနာနှငျ့ပတျသကျသောလက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကနေအတန်ငယ်ကွဲပြား။29, 30, 31 ငါတို့သည်ဤကွာဟမှုများအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်လက်တွေ့ setting တွင် non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထပြဿနာနှင့်အတူတင်ပြတစ်ဦးချင်းစီသည်ဤလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိုသီးသန့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျဉ်းမြောင်းစွာမိမိတို့၏မဟုတ်တဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောဘယ်သူကိုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏အဖွဲ့ခွဲဖွဲ့စည်းနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကြောင်းထင်ကြေး ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားတဲ့အုပ်စုများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး -mainstream ။31 နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တမ်းကြော်ငြာခဲ့လမ်းနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရွယ်တူချင်းထက် SEM အသုံးပြုမှုအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရ, ဖြစ်ဘူးသောသူတစ်ဦးချင်းစီစုဆောင်းလျှင်, SEM မှ arousal ၏လျော့နည်း fixed ပုံစံကိုလည်းပိုပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အသုံးပြုမှုတို့ပါဝင်သည်နိုင်သည့်, ဒီကပိုကျယ်ပြန့် SEM အသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
SEM သုတေသနများ၏အခြေအနေတွင် non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အသုံးပြုသူအုပ်စုများအကြားလိင်စိတ်နိုးထပို generalized ပုံစံများတွေ့ရှိချက်တဖြည်းဖြည်းပိုပြီး (Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း) "အစွန်းရောက်" SEM ရဲ့ contents ဖြစ်ကြောင်းယူဆသောတိုးတက်သော satiation အယူအဆကနေ diverging အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည် လိင်စိတ်နိုးထထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။32 Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အကြောင်းအရာလိင်စိတ်နိုးထလျှို့ဝှက် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများအတွက် (ပင်မ) လျော့နည်း "အစွန်းရောက်" SEM အကြောင်းအရာ arousal ဖယ်ထုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို, ဒီအယူအဆ corroborate မှမထင်ကြဘူး။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်သီးသန့်လိင်ကွဲယောက်ျား၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏တရားစီရင်ပိုင်နှင့် ပတ်သက်. Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ကိုဖြတ်ပြီး, သင်တန်းသားများကိုယေဘုယျအားဖြင့် "ကျန်းမာ" အဖြစ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားစစ်ကြောစီရင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်သူတို့ကိုတစ်ဦး "ဆိုး" လူတစ်ဦးအောင်မပြုခဲ့ကြောင်း။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လိင် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM ရဲ့ contents များကနှိုးဆော်ခြင်းတစ်ဦးချင်းစီဆိုးရွားစွာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းကိုတရားစီရင်ပိုင်အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့လမ်းအတွက် Self-stigmatize ဘူးကဖော်ပြသည်။
လိင်ကွဲလူတို့တွင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများကိုသူတို့ Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းရွယ်တူချင်းထက်လျော့နည်း "မကောင်းတဲ့" အဖြစ်အဖြစ်သိသိသာသာပိုပြီးကျန်းမာနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအကဲဖြတ်။ သို့သော်ထိုအကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ပြင်းအားကျိုးနွံသောကြောင့်, ဆောက်လုပ်ရေး Single-item တခုကိုညွှန်ကိန်းများသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်, ကြှနျုပျတို့လုံလောက်စွာသည်ဤတွေ့ရှိချက် contextualize ရာနှင့်အတူသုတေသနတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ကင်းမဲ့သောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤအထူးတွေ့ရှိချက်အပေါ်ထပ်မံသွားမယ်လို့မှရှောင်ကြဉ်။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ကိုပိုပြီးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုတိုးပွါးကြောင်းလမ်းတွင်ဤပဏာမတွေ့ရှိချက်ကိုစူးစမ်းဖို့အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်ခေါ်ဆိုပါ။
Hald နှင့်Štulhofer NPAS တို့၏ခန့်မှန်းနိုင်မှုတိကျမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင်6 SEM စားသုံးမှုအသက်အရွယ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထား, တွေ့ရှိချက်ကောင်းသောပြည်တွင်းရေးတရားဝင်မှုပြအတိုင်းအတာတသမတ်တည်းအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ထက်သိသိသာသာပိုကောင်းကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ဖြတ်ပြီးပစ်မှတ်အုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အတိုင်းအတာ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ထိရောက်မှု Non-လိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့လိင်ကွဲအမျိုးသမီးနိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လက်ခံ-လည်ပတ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများ၏လျှောက်လွှာခါးဆစ်အတိုင်းအတာ၏တိကျအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကောင်းခဲ့ကြောင်းအကြံပြု28 လိင်ကွဲအမျိုးသမီးတွေ မှလွဲ. အားလုံးအုပ်စုများသည်။
Non-လိင်ကွဲယောက်ျားဖွယ်ရှိပိုပြီး arousal ရှာတွေ့မယ်လို့အရာမဟုတ်သောလိင်ကွဲယောက်ျား၏ဖြစ်ရပ်အတွက် NPAS ၏ဆွေမျိုးအောက်ပိုင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ထိရောက်မှု Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထ၏ကနဦးခွဲခြားလိင်တူချစ်သူလိင်-related themes များပါဝင်သည်ဟူသောအချက်ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်များအတွက်တစ်ဦးကအကြောင်းပြချက်, (သီးသန့်) လိင်ကွဲယောက်ျားထက်။33 ဒီအုပ်စုတစ်စုအတွက် NPAS ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်အားနည်းသွားလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ NPAS စနစ်တကျသာမန်အောက်အဆင့်တွင်အဘယ်သူကိုအတွက်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးများ, အဘို့, ဒီအဘို့ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များရှိနိုင်။ (ဈ) non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုများအမည်ရ (ဈ) sadomasochism နှင့် (ii) ကျွန်ခံ, ကြီးစိုးနှင့်စည်းကမ်းများ၏ခွဲခြားအတွက်အဓိက featured သော themes များ၏ပင်မ2ဖို့ခေတ်ပြိုင်လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှုအတွက်စိတ်သဘောထားရှိပုံရသည်။ ကဲ့သို့သောစာအုပ်များနှင့်ရုပ်ရှင်အားဖြင့်ဤအမျိုးအစားလူကြိုက်များ Grey ကငါးဆယ် Shades အဓိကအားဖြင့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးတွေကိုထိခိုက်သွားပုံရသည်။19, 20, 34 (ii) ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာကောင်းစွာပညာတတ်အမျိုးသမီးများပိုကြီးတဲ့အချိုးအစားပါရှိသည်။ ပညာရေးကိုအနီးကပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲအတွက်အတိုးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ပြီးသောကြောင့်, ဤ (လည်း) အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Datasets အတွက်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးတွေတို့တွင် NPAS ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်း။ (iii) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်သို့သုတေသနအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ပိုမကြာခဏလွှမ်းမိုးခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖော်ပြသည်။35, 36 ထို့ကြောင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရုံစိုက်ပစ္စည်းများကို၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထိုသို့သောအကြောင်းအရာများ၏ဆွေမျိုးအမြားအဖြစ်ပျက်မှု၏အမြိုးသမီးမြားအကြားအားနည်းနိုင်ပါတယ်။ အလားအလာဆေးတစ်လက်အဖြစ်ကျနော်တို့ NPAS ၏အနာဂတ် Cross-ယဉ်ကျေးမှုစူးစမ်းသည့်အပိုဆောင်း Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းပစ္စည်းများစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် Non-သီးသန့်လိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့လိင်ကွဲမိန်းမတကာတို့ထက်သောဤပြဿနာ themes များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုနျးမြားပါဝငျကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယင်းအစီရင်ခံရလဒ်များကိုစဉ်းစားတဲ့အခါ, အတော်ကြာလေ့လာမှုန့်အသတ်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာပိုပြီးပညာတတ်များနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသင်တန်းသားများဆီသို့ biased ကြောင့်အဆိုပါလေ့လာမှုလေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်များအစဉ်အဆက်ကန့်သတ်နိုင်သည့် non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာမဟာဗျူဟာ, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ, သာ Self-အစီရင်ခံစာ-based အစီအမံများနှင့်အကဲဖြတ်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများလိင်သုတေသနအတွက်စံဖြစ်သော်လည်းသူတို့စနစ်တကျဘက်လိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေမိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်, တိကျမှုမဖွစျနိုငျတယျ။37 ထို့အပြင် SEM နှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်လိင်စိတ်ကူးယဉ်မှုများအားကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းများသည်ဤအယူအဆများ၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုလုံလောက်စွာမဖမ်းမိနိုင်သည့်အချက် ၁ ခုပါသောညွှန်းကိန်းများကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ 38) ။ ဒီအလင်းမှာဆက်စပ်တွေ့ရှိချက်ပဏာမထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
ဘေးဖယ်, ဤကန့်သတ်ချိန်ညှိခြင်း, လေ့လာမှုခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM vs Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှလိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-အစီရင်ခံပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ SEM အသုံးပြုသူများကိုဖြတ်ပြီး SEM အမျိုးမျိုးမှလိင်စိတ်နိုးထ၏ပျှမ်းမျှအဆင့်ဆင့်၏ပုံစံများသို့ 1st ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးထားပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာ non-ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အုပ်စုသည်သင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ SEM ဖို့ပို SEM နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-အစီရင်ခံသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းအုပ်စုသည်သင်တန်းသားများကို Non-fixation SEM arousal ပြသခဲ့သည်နှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းအကျိုးစီးပွားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းကို Non-အနုတ်လက္ခဏာတရားစီရင်ပိုင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုသောမကြာသေးမီကတီထွင် NPAS ပြသ6,7ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအသုံးပြုသူအုပ်စုများအတွက် SEM နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်စိတ်နိုးထအတူလုပ်ကိုင်သုတေသီများနှင့် Clinician များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော tool ကိုအောင်, ကောင်းသောတရားဝင်မှုနှင့်ယောက်ျားနှင့် Non-သီးသန့်လိင်ကွဲအမျိုးသမီးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် utility ကိုပြသခဲ့သည်။
Gert မာတင် Hald; Aleksandar Stulhofer; သူတို့ Lang
Chivers, ML, Rieger, G. အ, Latty, အီး et al ။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အထူးသဖြင့်လိင်ကွဲပြားမှု။ Psychol သိပ္ပံ။ 2004; 15: 736-744
Sarlo, အမ်နှင့် Buodo, G. အချင်းစီကိုယ်ပိုင်နည်း ကျား, မထိခိုက်စေအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှု, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်လိင်တူချင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2017; 171: 249-255
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် Rupp, HA နှင့်ဝေါ်လဲန်, K. လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2008; 37: 206-218
တစ်ပြိုင်တည်းပါ thermography နှင့် plethysmography နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏ကျားမတိကျတဲ့ဆန်းစစ် Huberman, JS နှင့် Chivers, ML ။ Psychophysiology ။ 2015; 52: 1382-1395
Rupp, HA နှင့်ဝေါ်လဲန်, အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် K. လိင်-တိကျတဲ့အကြောင်းအရာဦးစားပေး။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2009; 38: 417-426
Hald, GM နှင့်Štulhofer, A. လူများသည်မည်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကို သုံး၍ စုစည်းကြသနည်း။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားများကိုအကြီးစားအွန်လိုင်းနမူနာတွင်အကဲဖြတ်ခြင်း။ J Sex Res ။ ၂၀၁၆; 2016: 53-849
Hald, GM နှင့်Štulhofer, A. Authors ပြင်ဆင်ချက်စာ။ J Sex Res ။ ၂၀၁၆; 2016: 53
Knack, မိုင်, မာဖီ, အယ်လ်, Ranger, R. et al ။ မှုခင်းလူဦးရေအတွက်အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏အကဲဖြတ်။ ။ Curr စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ် 2015; 17: 1-8
Seto, MC နှင့် Lalumiere, ML အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေအကြောင်းဒါအထူးဘာလဲ Meta-analysis သည်မှတဆင့်ရှင်းလင်းချက်၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်။ Psychol Bull ။ 2010; 136: 526-575
Malamuth မိုင်, Hald GM က။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏မြစ်ဆုံမော်ဒယ်။ Boer DP ၌တည်၏။ (Ed က။ ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ Wiley သီအိုရီအပေါ်လက်စွဲစာအုပ်, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသရေး: Vol ဗြဲသီအိုရီစစ 53-71 ။ ။ John Wiley & Sons, Ltd.
Lalumiere, ML, Quinsey, VL, Harris က, GT ကို et al ။ differential phallometric အကဲဖြတ်အတွက် coercive လိင်အားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းမုဒိန်းသမားများမှာ ?. အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003; 989: 211-224
Quinsey, VL နှင့် Lalumiere, ကလေးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ML အကဲဖြတ်ခြင်း။ ၁ ed ။ Sage, ထောင်သပိတ်, CA; ၂၀၀၁
Hald, GM က, Seaman, C တို့နှင့် Linz, ဃလိင်နှင့်ညစ်ညမ်း။ အတွက်: လိင်နှင့်စိတ်ပညာ၏ယားလက်စွဲစာအုပ်, အသံအတိုးအကျယ်22 ။ Contextual ချဉ်းကပ်။ အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး, ဝါရှင်တန်ဒီစီ; 2014: 3-35
Hatzenbuehler, ML လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအမည်းစက်သည်မည်သို့“ အရေပြားအောက်သို့ရောက်သွား” သနည်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျန်ဖြေခြင်းမူဘောင်။ Psychol Bull ။ 2009; 135: 707-730
Herek, United States မှာ GM ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမည်းစက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်စွန်းကွက်: တစ်အယူအဆရေးရာမူဘောင်။ အတွက်: DA မျှော်လင့်ချက် (။ Ed က) ခေတ်ပြိုင်လိင်တူချစ်သူအပေါ်အမြင်များ, လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးအထောက်အထားတွေကို။ Springer, နယူးယောက်, 2009: 65-111
Jahnke, အက်စ်, Imhoff, R. နှင့် Hoyer, pedophilia နှင့်အတူလူဦးဂျေရဲ့သားကောင်: နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်စစ်တမ်းများ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2014; 44: 21-34
Jahnke, အက်စ်, Schmidt က, AF, Geradt, အမ် et al ။ pedophilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူတို့တွင်အမည်းစက်-related စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015; 44: 2173-2187
Ahlers, CJ, Schaefer, GA, Mundt, IA et al ။ paraphilias ၏ပါဝင်မှုသည်မည်မျှထူးခြားသနည်း။ ရပ်ရွာအခြေပြုအမျိုးသားနမူနာများတွင်ပါရာဝတီ - ဆက်စပ်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပုံစံများ။ J Sex Med ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 8-1362
Joyal, CC နှင့် Carpentier, J. ယေဘုယျလူ ဦး ရေတွင် paraphilic အကျိုးစီးပွားနှင့်အပြုအမူများပျံ့နှံ့မှု - ပြည်နယ်စစ်တမ်းတစ်ခု။ J Sex Res ။ 2017; 54: 161-171
ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း Joyal, CC, Cossette, A. နှင့် Lapierre, V. ? ။ J Sex Med ။ ၂၀၁၅; 2015: 12-328
Štulhofer, အေ, Buško, V. နှင့် Brouillard, P. သစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုစကေးနှင့်၎င်း၏တိုတောင်းသောပုံစံ။ in: TD Fisher, CM Davis, WL Yarber, (Eds ။ ) လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအစီအမံလက်စွဲစာအုပ်။ 3rd ed ။ Routledge, New York; 2011 ခုနှစ်: 530-532
Hald လူငယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက် GM ကကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2006; 35: 577-585
Ogas, O. နှင့် Gaddam, S. ၁ ဘီလီယံမကောင်းသောအကြံအစည်များ - အင်တာနက်ကလိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းပြောပြသည်။ Penguins Publishing Group, New York; ၂၀၁၁
Ogas, O. နှင့် Gaddam, S. ၁ ဘီလီယံမကောင်းသောအတွေးများ - ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစမ်းသပ်မှုကလူသားတို့၏ဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြသည်။ Penguins, New York; ၂၀၁၁
Fraley, C နှင့် Raftery, AE မော်ဒယ်အခြေပြုစပျစ်သီးပြွတ်၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သိပ်သည်းဆခန့်မှန်းခြင်း။ J ကို Am Stat Assoc ။ ၂၀၀၂; 2002: 97-611
Fraley, C တို့, Raftery, AE နှင့်မာဖီ, R ကိုများအတွက်တီဘီ Mclust ဗားရှင်း 4: မော်ဒယ်-based Cluster, ခွဲခြားနှင့်သိပ်သည်းဆခန့်မှန်းချက်သာမန်အရောအနှောမော်ဒယ်လ်။ စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန, ဝါရှင်တန်ရှိ Seattle တက္ကသိုလ်; 2012
Chivers, ML, Seto, MC, Lalumiere, ML et al ။ တစ်ဦး Meta-analysis သည်: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါအတိုင်းအတာ၏သဘောတူညီချက်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2010; 39: 5-56
Streiner, DL နှင့် Caimey, J. ROC အောက်မှာဘာတွေရှိပါသလဲ။ လုပ်ဆောင်ချက်ဝိသေသလက္ခဏာများခါးဆစ်လက်ခံမှတစ် ဦး နိဒါန်း။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၀၇; 2007: 52-121
ဥပဒေများ, DR, မာရှယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deviation နှင့်အတူ WL Masturbatory reconditioning: တစ်ဦးအကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်ကို။ Adv ပြုမူနေ Res Ther ။ 1991; 13: 13-25
အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်: paraphilias ၏ကုသမှုအတွက်မာရှယ်, WL, မာရှယ်, LE နှင့် Serran, ဂျော်ဂျီယာမဟာဗျူဟာ။ အမ်းဗြာလိင် Res ။ 2006; 17: 162-182
McManus MA, Hargreaves, P. , သက်တံ့ရောင်, အယ်လ် et al ။ Paraphilias: ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, ရောဂါနှင့်ကုသမှု။ ။ F1000Prime ကိုယ်စားလှယ် 2013; 5: 36
Seigfried-Spellar, KC နှင့်ရော်ဂျာ, MK deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား ?. ကွန်ပျူတာက Hum ပြုမူနေ။ 2013; 29: 1997-2003
Rullo, je, Strassberg, DS နှင့် Miner, ရိုးရိုးယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအတွက် MH ကျား-specific ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2014; 44: 1449-1457
Dawson, SJ, Bannerman, BA ဘွဲ့များနှင့် Lalumiere, ML Paraphilic တစ် nonclinical နမူနာများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုတစ်ခုစာမေးပွဲစိတ်ဝင်စား။ လိင်အလွဲသုံးမှု။ 2016; 28: 20-45
Hawley, PH နှင့် Hensley, WA လူမှုလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အပြင်းအထန်လက်အောက်ခံစိတ်ကူးယဉ်မှုများ - femတ္ရောဂါဗေဒသို့မဟုတ်စွမ်းအားလား။ J Sex Res ။ 2009; 46: 568-585
Leitenberg, အိပ်ချ်နှင့် Henning, K. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာစောင်။ 1995; 117: 469-496
ဂရေဟမ်, CA, Catania, ဂျေအေ, အမှတ်တံဆိပ်, R. et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြန်လည်မှတ်မိခြင်း - ဒိုင်ယာရီကိုရွှေစံအဖြစ် သုံး၍ အင်တာဗျူးမှတစ်ဆင့်မှတ်ဥာဏ်ပြန်ယူမှုကိုနည်းစနစ်ကျကျလေ့လာခြင်း။ J Sex Res ။ ၂၀၀၃; 2003: 40-325
Wilson က, လိင်စိတ်ကူးယဉ်၏ GD တိုင်းတာခြင်း။ လိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1988; 3: 45-55